Amafemu ezemithi okwamanje akhiqiza imithi ehlukahlukene ukulungisa lezi zimo noma ezinye izimo zomzimba. Imithi ye-antibacterial ingahlukaniswa eqenjini elihlukile. Ukusetshenziswa kwabo kufanele kuhlanganiswe nezinkomba ezithile. Omunye wale mithi yiziphilisi "Azitrox". Kungenxa yabo ukuthi lesi sihloko sizokutshela. Uzothola ukuthi imiphi imithi "i-Azitroks". Futhi uzokwazi ukuthola umbono wabodokotela mayelana nalo muthi.
Iyini umuthi "i-Azitrox"
Ukubuyekezwa odokotela, kanye nemiyalelo yokusetshenziswa, kubonisa ukuthi le mithi ingokwaqembu lama-antibiotic futhi imelela ama-macrolides. Isidakamizwa sitholakala ngendlela yamathebulethi noma i-powder ukulungisa ifomu elimanzi lomuthi. Into esemqoka yokusebenza kwezidakamizwa yi-azithromycin. Odokotela bathi lokho kuye ngokuthi uhlobo lomuthi, umuthi ungase ube nezinxenye ezengeziwe.
Yini ochwepheshe abathi ngayo ngesenzo somuthi
Imiphi imithi i-Azitrox enayo odokotela? AmaMedicia abika ukuthi lesi sidakamizwa sinamandla kakhulu ekusebenzeni kwayo. Umphumela wokwelashwa usuvele usuku ngosuku lwesibili ngokusetshenziswa kahle. Futhi, ochwepheshe babhala izici zomuthi. Ngokungafani namanye ama-antibiotics, okudinga ukuphuza ngesonto elilodwa, ukumiswa kanye namathebulethi "i-Azitrox" asetshenziselwa izinsuku ezintathu kuphela. Lokhu kungenxa yokuthi izidakamizwa zinomthelela wokusala, ohlala cishe ezinsukwini ezinhlanu.
Umuthi, ukungena emzimbeni womuntu, usheshe uthathwe esiswini nasemathunjini. Ochwepheshe bathi into esebenzayo isakazwa ekusakazweni kwesistimu futhi ifinyelela ezindaweni ezithintekile. Isidakamizwa senza isenzo se-extracellular, futhi singene emabhaktheriya bese sibhubhisa.
Izinkomba zokusetshenziswa kwezidakamizwa
Isidakamizwa se-azithrox (ukumiswa kanye namathebulethi) kunqunywe ezimweni lapho izinambuzane namabhaktheriya ezwela kulo muthi zitholakala. Ukuze unqume lokhu, kuyadingeka ukudlulisa ukuhlaziywa. Lokhu kungaba ukuhlolwa kwegazi, isisindo sokucacisa i-microflora nezinye izinqubo zokuxilonga. Uma kunquma ukuzwela kulo muthi, umthamo ngamunye unqunyelwe umuntu ngamunye. Kulokhu, ukwelashwa kuvame ukuyinkimbinkimbi.
Kulezi zimpawu zokusetshenziswa kwezidakamizwa "i-Azitrox" (ukumiswa noma amaphilisi) kungathiwa yizifo zendlela yokuphefumula engenhla. Phakathi kwabo, i-tonsillitis, i-sinusitis, i-rhinitis yemvelaphi yebhaktheriya njalonjalo. Izifo zezingxenye ze-ENT, phakathi kwazo i-otitis ne-eustachitis ezihlala endaweni eyinhloko, nazo zibonwa njengendlela yokubonisa le mithi.
Isidakamizwa sinqunywe ukukhubazeka komgudu wokuphefumula okuphansi: ukukhwehlela okukhwehlelayo, ukuphefumula kwamaphaphu, i-bronchitis, isifo esingelapheki. Kumele uqaphele ukuthi ezimweni ezinjalo, ngaphambi kokuba kuqashwe ukwelashwa, kubalulekile ukudlulisa isisindo esivela ku-pharynx kanye nengxenye ye-sputum ezohlolwa. Uma kungenjalo, ukwelashwa kungabelwa ngokungalungile futhi umphumela ngeke utholakale.
Isidakamizwa sinconywa ukuthi sisetshenziswe ekwelapheni okuyinkimbinkimbi. Ngalesi sibonakaliso sokwelashwa kungaba yindlela yokugoma kanye nokutheleleka kobulili. Futhi, lesi sidakamizwa sibhekane kahle nezilonda zesikhumba, isibonelo, izilonda.
Yiziphi odokotela abathi mayelana nomkhawulo
Njengemithi eminingi efanayo, ukubuyekezwa kwe- "Azitrox" kuhle. Kodwa-ke, ungakhohlwa ukuthi noma imuphi umuthi unezinkampani eziphikisana nazo.
Odokotela babika ukuthi lesi sidakamizwa asivumelekile ukuba sisetshenziswe uma kwenzeka ukutheleleka ngegciwane lesandulela ngculaza, ngoba kuleso simo kuyobe kungenamandla. Akunconywa futhi ukuba enze ukwelashwa uma isiguli sinomzwelo okwandisiwe kwesinye sezigaba zomuthi. Ungasebenzisi imithi phambi kwesifo sezinso nesibindi ngesimo esibucayi. Odokotela abazange banikeze izidakamizwa ezibhebheni kubantu abangaphansi kweminyaka engu-12 ubudala. Ezimweni ezinjalo, i-Azitrox isetshenziselwa izingane ekumiswe.
Odokotela babika ukuthi kuyadingeka ngokukhethekile ukuphatha le mithi nalabo abathatha imithi eyengeziwe yokulungiswa. Futhi, phambi kwesifo senhliziyo nemithambo yegazi, ngezinye izikhathi umphumela wemithi ungathinta isimo jikelele sesiguli.
Amaphilisi e-Azitroks, ukumiswa: imiyalelo yokusetshenziswa
Yini odokotela abasitshela ngayo ngendlela esetshenziswa ngayo izidakamizwa? Odokotela bathi noma yiluphi uhlobo lwezokwelapha kufanele lithathwe ihora elilodwa ngaphambi kokudla noma amahora amabili emva kokudla. Lesi simo kumele sigcinwe ngokusebenza kahle kwezidakamizwa, kanye nokugwema ukuthuthukiswa kwemiphumela emibi.
Isilinganiso semithi yeziguli ezikhulile yi-milligriyoni ama-azithromycin angu-500 ngosuku. Qinisekisa ukuthi ucabangela inani lale nsimbi ku-capsule eyodwa. Ezimweni ezimbi kakhulu nezifo zesikhumba, umuthi ungasetshenziswa ngesamba segremu elingu-1 ngosuku. Ukwelashwa kuthatha izinsuku ezintathu. Esikhathini sokuncoma kukadokotela, inkambo ngezinye izikhathi inganwetshwa ezinsukwini ezinhlanu, kodwa ayisekho.
Kuzingane, imithi inqunywe kuye ngesisindo somzimba wengane. Uma isiguli sinesisindo esingama-25 kuya ku-45 kg, kunconywa ukuthi anike ama-250 mg we-azithromycin ngosuku. Ezinganeni ezincane, imithi isetshenziselwa umthamo ngamunye futhi ngendlela yokumiswa.
Odokotela babika ukuthi uma usebenzisa ifomu lesiraphu, udinga ukuphuza amanzi amaningi emva kokuthatha lesi sidakamizwa. Lesi senzo sizosiza ekugwemeni ukuxazulula izingxenye zemithi embranini yomsindo emlonyeni nasendlini.
Enye ikhwalithi enhle, ebikwa odokotela neziguli, isesidakamizweni "sama-Azitroks". Ngokungafani nezifanekiselo zalo, umuthi unezindleko ezifinyeleleka kubantu abaningi abavamile. Kumele uqaphele ukuthi isigaba samanani sesidakamizwa siyahlukahluka kuye ngokuthi ifomu lakho lilingani.
Ngakho, amaphilisi "Ama-Azitrox" amanani angama-ruble angu-200 kuya kwangu-300. Iziguli zithi umuthi ukhishwa ama-capsules angu-3 no-6 ephaketheni. Kungabuye ibe nomthamo wama-250 noma ama-milligram angu-500 we-azithromycin. Ukumiswa kokuphatha ngomlomo kuzokubiza ama-ruble angu-200. Kulesi simo, umthamo wesidakamizwa ungaba yizigidi eziyi-100 noma ezingu-200 zezinto ezisebenzayo kuwo wonke ama-milliliters angu-5.
Ukubuyekeza mayelana nomuthi
Abathengi babika ukuthi ukumiswa kunomusa omuhle kakhulu. Yingakho izingane zivuma njalo ukwelashwa. Futhi, abathengi bafakazela ukuthi imithi ingase ingasebenzi kahle emathunjini. Isidakamizwa asibulali amabhaktheriya kuphela we-pathogenic, kepha futhi nezinambuzane eziwusizo. Odokotela bayeluleka ukuthi ngenkathi ukwelashwa noma emva kwalo, kubalulekile ukulungisa lesi simo.
Abaqhakamisi babika ukuthi ngama-antibacterial agents amaningi, i-"Azitrox" itholakele ukuthandwa okwedlule eminyakeni edlule. Uyabelwa izingane kanye nabantu abadala. Le mithi ivame ukuthengwa kanye nama-bacteria anenzuzo kanye nemithi yokuzivikela.
Ufunde okuningi mayelana nomuthi "i-Azitrox". Naphezu kokusebenza kahle nokutholakala kwayo, ngaphambi kokusebenzisa imithi okudingeka uyivakashele udokotela. Khumbula ukuthi izidakamizwa zokulwa ne-antibacterial asinamandla ngaphambi kokutheleleka ngegciwane. Noma kunjalo, kungathinta umzimba wesiguli ngokucindezela ukumvikela kwakhe. Nginamandla kuwe!
"Lineks" yezingane ezisanda kuzalwa
Saki udaka: izinkomba kanye contraindications, ukubuyekezwa kwesicelo. sibhedlela Saki
Summer imfashini: 10 shades abe ngawamatshe obomvu izinwele udayi
ELeghorn (inkukhu zohlobo) ukubuyekezwa. ukukhiqizwa Izikhukhukazi Iqanda ephezulu
Indlela okumele kusebenze ngemuva Lwezinhlelo ku-PC yakho futhi kumadivayisi eselula?
Kuyini ngebulili: umbono komlando yesimanjemanje
Kanjani ukuze ushintshe iphasiwedi yakho ku-ICQ?
Inkukhu umucu e cream sauce. Ungadliwa bonke bathanda